Ahoana ny fampiasana ny mpilalao Flash ao amin'ny iPad
Ny Photon Flash Player dia mpilalao Internet sady Flash Player izay ahafahanao mahita ny Flash video ary milalao lalao Flash ao amin'ny iPad. Ary noho ny iPad tsy nanohana ny Flash, dia iray amin'ireo fomba vitsivitsy ahafahana Flash amin'ny miasa eo amin'ny iPad.
Raha te hilalao Flash ao anaty navigateur ianao, dia mila tapen-tsainao ny bokotra Lightning eo an-tampon'ny efijery. Io dia mametraka ny browser amin'ny maodin'ny Flash. Tokony hametraka ny browser amin'ny Flash mozika alohan'ny hitsidihana ny tranonkala amin'ny Flash. Izany dia hitazona ilay pejy hamerenana anao amin'ny pejy hafa raha hitanao fa eo amin'ny iPad ianao.
Ianareo manana ny Flash milalao eo amin'ny iPad, ireo bokotra telo eo an-tampon'ny efijery dia mamaritra ny fomba fiasa amin'ny interface. Ny tranonkala dia afaka mifandray amin'ny môtô, izay ny bokotra miaraka amin'ny rantsantanana manondro, ny mozika, izay ny bokotra amin'ny tondro mpanitsy, na ny fomban-dalao, izay misy bokotra misy takelaka tanana.
Mety haka fanandramana kely fotsiny izy mba hahafantarana hoe iza no fomba hiasa tsara indrindra amin'ny Flash Flash izay milalao navigateur. Ho an'ireo horonantsary sy tranonkala maro dia tokony ho tsara ny fomba fiasa tsy tapaka. Ity fomba fiasa ity dia mihetsika toy ny navigateur iPad mahazatra, izay mamela anao hiketrona fotsiny ny bokotra ary hikirakira ny efijery mivezivezy.
Ny lalao sasany dia mety mitaky anao hivezivezy amin'ny mozika. Izany dia ahafahanao manipika fehezantenin'ny totozy virtoaly eo amin'ny efijery ary tadiavo ny kitiho. Izany dia ahafahana misimisy kokoa noho ny fomba fiasa mahazatra.
Ny fomba nofinofisina dia natao hanamboarana sarintany na ho an'ny Flash izay ahafahanao manilaka ampahany amin'ny efijery mba hamindrana azy eo amin'ny fampiratiana. Ilaina koa ny lalao maro.
Ny bokotra eo amin'ny seha-pifaneraserana dia ahafahanao mamintina ny navigateur amin'ny karazana Flash iray manokana: video, tranonkala na lalao. Raha hitanao fa somary marefo ny lahatsoratra eo amin'ny sehatra, dia tokony hanampy azy io hanesorana azy io. Azo atao ny manitsy ny sehatra fitetezam-paritra raha mbola hitanao fa mibaribary ny screen. Ny avo kokoa ny fametrahana ny bandwidth, ny tahirin-kevitra kokoa dia nafindra, ka ity toerana ity dia mety ho manan-danja ho an'ireo izay amin'ny drafitra data. Tsara ny mametraka ny bandwidth hatramin'ny 6 ho an'ny lalao, manodidina ny 3 na 4 ho an'ny video ary 1 na 2 ho an'ny tranonkala.
Azonao atao ihany koa ny manova ny kilalao kilalao. Ny klavier eo amin'ny efijery amin'ny iPad dia samy hafa amin'ny fampiasana klavin'ny serasera amin'ny fametrahana ny fanalahidy dia tsy mandefa foana ny fanindriana, izay midika fa tsy ho afaka hilalao lalao Flash amin'ny fampiasana azy ianao. Ny lanjan'ny lalao dia mihaingo kokoa ny efijery ary natao ho mora kokoa ny milalao lalao Flash.
Ahoana no hamoronana Album Photo mivantana iCloud ho an'ny iPad
Fomba tsotra hapetaka amin'ny iPad
Ahoana no Fandefasana Mozika amin'ny iPad?
Ahoana ny hanomezana iPad App
Ahoana ny fametrahana fanairana amin'ny iPad Clock
Ahoana ny amin'ny 'Facebook' Like, Tafo na Mijery ny iPad App
Ahoana ny fampiasana ny tranokala iCloud ao amin'ny iPad
Ahoana no hanesorana torohevitra sy Apps hafa avy amin'ny fampahafantarana ao amin'ny iPad
Inona avy ny Code Prompt Code?
Ny 7 Best Power Inverters ny hividy amin'ny 2018
Ahoana ny famakiana ny hafatra amin'ny endrika lehibe kokoa amin'ny Windows Mail na Outlook
Famoronana Tabila ao amin'ny Microsoft SQL Server 2008
Inona ny rakitra NEF?
VoIP ho an'ny orinasa madinika sy mena
Inona ny Sequence Boat?
Page Layout Measurements
Ahoana ny fandefasana ny fanaparitahana Hardware amin'ny karajia amin'ny XP
Mampiasa iBooks sy iBookstore
Ahoana ny famakiana tsy misy hafatra any Yahoo! Mail
Aiza no ahitana ny 'The Sims 3' Nude Patch
Inona no lokon'ny Chartreuse?
Miaraka amin'ny torohevitra tsotra tsotra, azonao atao ny manangana portfolio-tranonkala
Tari-dalan'ny mpitsidika amin'ny fametrahana rohy anaty ao HTML
Integra dia miditra ao amin'ny tsenan'ny Sound Sound miaraka amin'ny DLB-40.6
Inona ny Google Voice?
IPod nano: Izay rehetra tokony ho fantatrao